आफ्नो रोजाइको टिम पराजित हुँदा के गर्नुभयो ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः असार २५, २०७५ - साप्ताहिक
आफ्नो रोजाइको टिम पराजित हुँदा के गर्नुभयो ?
म मेसीको व्यक्तित्वको प्रशंसक हुँ । खेलमा हारजित सामान्य हो, तर आफूलाई मन परेको टिमले जित्दा रमाइदो रहेछ तर हार्दा भने खेलाडीसँगै निराश भएको थिएँ ।
वसन्त थापा, गायक तथा संगीतकार
म अर्जेन्टिनाको समर्थक हुँ । अर्जेन्टिना फ्रान्ससँग पराजित हुँदा केही नबोली बसेँ । केही घण्टा दु:ख लाग्यो, जसले गर्दा अरू खेल पनि हेर्न मन लागेन ।
बाबु बोगटी, गायक तथा अभिनेता
केही गरिनँ । जित्ने टिमलाई शुभकामना दिएँ अनि टेलिभिजन बन्द गरेर सुतेँ ।
साह्रै नराम्रो लाग्यो, तर के गर्नु खेलमा हारजित हुन्छ नै भनेर चित्त बुझाएको छु ।
स्वरूपराज आचार्य, गायक
फेसबुकमा रमाइला स्टाटस हालेर बसेँ । तैपनि अन्तिम चार मिनेटमा खेलेको खेल पहिल्यै खेल्नुपथ्र्यो भन्ने मनमा लागिरह्यो ।
नानी थापा, रंगकर्मी
आफूले समर्थन गरेको टिम पछाडि पर्दादेखि नै आफैँ खेल मैदानमा गएर गोल हान्नुजस्तो भएको थियो ।
हरिहर अधिकारी, युवा ज्योतिष
राम्रो हुँदाहुँदै पनि जर्मनी पराजित भयो । आफूलाई मन परेको टिमले हारे पनि मलाई खासै केही भएन । यसपाली पुरानो टिमले भन्दा नयाँ टिमले विश्वकप उचालेको हेर्न मन छ ।
अमर न्यौपाने, साहित्यकार
एकछिन दु:खी भएँ । खेलमा हारजित सामान्य हो भनेर आफूलाई कन्भिन्स गरेँ ।
कुमार कट्टेल, हास्यकलाकार
म अर्जेन्टिनाको समर्थक हुँ, तर अर्जेन्टिना र फ्रान्सबीचको खेल हुने बेलामा म रेकर्डिङमा थिएँ, जसले गर्दा उक्त गेम हेर्न पाइनँ । पछि अर्जेन्टिनाले हार्‍यो भन्ने सुन्दा नरमाइलो लाग्यो, तर खासै प्रतिक्रिया जनाइनँ ।
राधिका हमाल, गायिका
कुनै पनि खेलमा हारजित स्वाभाविक हो । हारले नै जितको पाठ सिकाउँछ र अब आउने दिनमा अझ बलियो बनाउँछ । अर्जेन्टिना फ्रान्ससँग पराजित हुँदा मैले कुनै प्रतिक्रिया जनाइनँ । अर्को विश्वकपमा अर्जेन्टिनाले राम्रो प्रदर्शन गर्नेछ भन्ने आशा राखेको छु ।
म स्पेनको समर्थक हुँ । यसपालि स्पेनको खेल जस्तो हुनुपथ्र्यो त्यस्तो थिएन, तैपनि आफूले समर्थन गरेको टिम पराजित हुँदा निकै चित्त दुख्यो । धेरै बेरसम्म दु:खी भएँ, तर क्रोएसिया र डेनमार्कको खेल हेर्न थालेपछि आफैं फ्रेस भएँ ।
म अर्जेन्टिना समर्थक हुँ । अर्जेन्टिनाले पछिल्ला दुई खेल राम्रो खेलेको थियो, तैपनि फ्रान्ससँग पराजित भयो । आफूले समर्थन गरेको टिम पराजित हुँदा केही समय दु:खी भएँ अनि फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेँ ।
योगेश भट्टराई, नेता, नेकपा
अजेन्टिना फ्रान्ससँग पराजित हुँदा साह्रै नरमाइलो लागेको थियो, तर पछि पोर्चुगल पनि पराजित भएपछि भने सान्त्वना मिल्यो ।
म जर्मनीको समर्थक हुँ । यसपटक जर्मनी समूह चरणबाटै बाहिरिँदा निकै दु:ख लाग्यो । त्यही भएर फेसबुकमा स्टाटस पनि लेखेँ ।
जुनु रिजाल, गायिका
म सानैदेखि अर्जेटिनाको समर्थक हुँ, तर यसपालि अर्जेन्टिनाले राम्रो खेल प्रस्तुत गर्न सकेन, जसले गर्दा पराजित भयो । आफूले सानैदेखि समर्थन गर्दै आएको टिम पराजित हुँदा निकै दु:ख लाग्यो । यद्यपि मैले आफूलाई सम्हालेँ । अर्को पटकको विश्वकप अर्जेन्टिनाले जित्छ भन्ने आशा गरेको छु ।
ऋषि लामिछाने, निर्देशक
म रोनाल्डोको फ्यान हुँ । म त्यतिबेला मोबाइलमा फुटबल हेरिरहेको थिएँ । पोर्चुगलको हारपछि मैले त्यो मोबाइल नै फ्याँकिदिएँ ।
अर्जेन्टिना हार्दा मलाई मेसीको एकदमै माया लागेर आयो ।
प्रदीप पौडेल, नेता, नेपाली कांग्रेस
प्रकाशित :असार २५, २०७५
स्कुल कलेजमा ‘कुम्भ करण’ टिम
मान्छे फकाएर आफ्नो हुँदैन